चितवनकी बृन्दाले “DID लिटिल मास्टर्स”मा धमाका मच्चाउँदै (भिडियो सहित) – पुरा पढ्नुहोस्……
चितवनकी बृन्दाले “DID लिटिल मास्टर्स”मा धमाका मच्चाउँदै (भिडियो सहित)
भारतीय मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नेपालीहरुको सक्रिया पहिलेदेखि नै रहँदै आएका छन् । फिल्मी क्षेत्रदेखि टेलिभिजनको दुनियामा समेत नेपालीहरुले आफनो करामत देखाउँदै आएका छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै नेपालीहरुको बाहुल्यता र सहभागीता रहँदै आएको चर्चित रियालिटी शो “डान्स इण्डिया डान्स लिटिल मास्टर्स” को चौथौँ सिजनमा पनि नेपालीहरुको सहभागीता रहेको छ ।
हाल जि टिभीबाट प्रसारण भईरहेको उक्त कार्यक्रमा चितवनकी बृन्दा दाहालले धमाका मच्चाईरहेकीछिन् । टप १६ मा पुग्न सफल चितवनकी बृन्दाको कुशल नृत्य , उनको डान्सलाई लिएर गरिएको संघर्ष र इनोसेन्ट अनुहारको कारण पनि उनले जजहरुको मन जित्न सफल भएकीछिन् । बिषेशगरी आफनो बाबाबाट कुनै साथ नपाएकी बृन्दा हजुरआमाको साथ लिएर दिल्ली पुगेकी थिईन् ।
नातिनीको सपना पुरा गर्न बृन्दालाई घरबाट लिएर भागेर भारत पुगेकी उनको हजुरआमा साथै छिन् । १० बर्षीय बृन्दाको संघर्षबाट भावुक भएका जजहरुमा मर्जीले उनलाई छोरीको संज्ञा दिएका छन् । यसअघि पनि नेपालबाट तेरियाले डान्स इण्डिया डान्सको उपाधी जितेकी थिईन् भने अन्य केहीले राम्रो प्रतिभा पनि देखाए । साथै उक्त रियासलिटी शोमा नै अर्का नेपाली रोसन थापाले पनि टप १६ मा पुगेर आफनो कमाल देखाईरहेका छन् । जेहोस नेपालकै सान बृन्दा र रोसन थापालाई अझै सफलताको शुभकामना…
भिडियो सहित हेर्नूहोस
Prevधूर्मूसले नमूना नेपाल’ परियोजनाको काम भइरहेकाबेला गरे अर्को ठूलो यस्तो आयोजनाको घोषणा…
Next३ जना युवा ४ दिनदेखि पानी विनाको अनशनमा तड्पी रहदा रबि पुगे (भिडियो सहित)
नेपाल आईडलको बुद्ध, निशान र प्रतापको फ्यानका लागि दुखद खबर । जापान जान लाग्दा यस्तो भयो (भिडियो सहित)
रबी लामिछिने भन्छन्:- ठाडो आदेशमा गरिबको टहरामा डोजर चल्ने तर, अर्बपतिहरुको भवनमा नचल्ने ?
अशोक दर्जीको दोस्रो गीतको भिडियो सुटिङ हुदै, गीतमा आफ्नै मिल्ने साथि भुईकटरले अभिनय गर्दै ! (हेर्नुहोस भिडियो सहित)